Qaybaha Saxda ah, Qaybaha Iskiriimka, Qaybaha Bolts - Saxnaanta QY
Qaybaha birta lagu dhejiyo ayaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha baabuurta.
ROBOTIGA IYO ROBOOTADA SMART
QY Precision waxay khibrad qani ah u leedahay habaynta Qaybaha CNC ee warshadahan.
Soo-saare xirfad leh oo loogu talagalay Qaybaha CNC ee saxda ah ee baahida.
Qaybaha CNC ee qalabka caafimaadka waxay u baahan yihiin saxnimo aad u sareysa.
Tusaalaha QAYBAHA SHOW
Qaybaha Birta Gawaarida
QY Precision waxay ku taal Shenzhen China, Hong Kong oo u dhow. Waa warshadda adeegga mashiinnada ee CNC. Bixinta qaybo mashiinno caado ah oo tayo sare leh, waxay ku guulaysataa sumcad sare labadaba suuqa gudaha iyo dibaddaba, iyada oo la aasaasay iskaashi cajiib ah oo waqti dheer leh shirkado badan oo ka socda warshado kala duwan. Dhammaan qaybaha waxaa lagu soo saaray Shiinaha waxaana loo dhoofiyaa inta badan Japan/Canada/US & suuqyada Yurub. QY Precision waxay ku takhasustay naqshadaynta iyo soo saarista qaybaha iyo qaybaha birta ee saxda ah. Diirada saar warshadaha iyo ficilka dalabka, inaad noqoto lamaanahaaga aad aaminsantahay waa hadafkeena.
Farsamo-yaqaan khibrad u leh inuu sameeyo habsocodka, iyo injineer xirfadle ah si uu ku siiyo xalka codsigaaga cusub.
Khibrad u leh Waaxda Ganacsiga Dibadda. Isgaarsiin degdeg ah, aqoon warshadeed heer sare ah, adeeg iib-ka-dib oo cajiib ah iwm.
Waxaan abuurnay iskaashi istaraatiijiyadeed alaab-qeybiyeyaasha alaabta ceeriin, sidaas darteed waxaan aad ugu kalsoonahay inaan kaa caawinno inaad dhimo kharashyada.
Sii wad dadaalka aad ku samayn lahayd si ka sii wanaagsan. Si aad u noqoto lamaanahaaga, ma aha oo kaliya alaab-qeybiye.
Saxnaanta QY waxay dhamaystiri kartaa dhammaan Habka CNC, oo ay ku jirto daawaynta kulaylka. Daawaynta kulaylka birta waa hab lagu kululeeyo birta ku shaqaynaysa heerkul ku haboon meel dhexaad gaar ah, ka dib marka lagu hayo heerkulkan muddo cayiman, la qaboojiyo ...
Habka Wax-soo-saarka: Dhimista Kaabista. Si loo badbaadiyo kharash badan wax soo saarka ballaaran, tayada sare iyo xasilloon. Saxnaanta QY waxay khibrad u leedahay dhammaan noocyada wax soo saarka qaybaha, soo dhawoow soo dir su'aal. Sida qalab geeddi-socod oo muhiim ah, caaryada waxay ku jirtaa boos muhiim ah warshadaha warshadaha sida co...
Tayada caaryada dhinta-dhimista waxaa ka mid ah dhinacyadan soo socda: (1) Tayada aluminium aluminium qaybo dhinta-dhimista: xasilloonida cabbirka iyo waafaqsanaanta qaybaha aluminium aluminium-dhimista, jilicsanaanta dusha qaybaha shubka, isticmaalka heerka aluminium aluminium, iwm; (2)...